I-Quiet East Nashville Cottage - I-Airbnb
I-Quiet East Nashville Cottage
814 okushiwo abanye
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Landon
U-Landon Ungumbungazi ovelele
Qaphela: Indlu encane ayizange ithintwe yisiphepho ekuqaleni kwalo nyaka futhi besithatha izinyathelo zokuphepha ezengeziwe ukuze siqinisekise ukuthi indawo iyahlanzwa phakathi ne-COVID-19. Sibheke ngabomvu ukukwamukela.
Igumbi lokulala eli-1 elithule enhliziyweni ye-East Nashville. Ukuhamba ibanga ukuya ku-5-Points nezindawo eziningi zokudlela ezinhle nezitolo. Ukushayela okufushane ukuya edolobheni. Umbhede olingana nendlovukazi, ikhishi, negumbi lokugezela elineshawa. Ukungena kwangasese nendawo yokupaka yangasese.
Ikotishi lisendaweni ethule, eyimfihlo eyi-quarter-acre engemuva enomnyango ovela ku-alley. Kukhona umbhede ongangendlovukazi onethezekile kanye nekhishi elihlome ngokuphelele ngezidingo eziyisisekelo zokupheka. Indlu yokugezela egcwele ifakwe ishawa emile kanye nobuze. Kuhlinzekwa insipho, ishampoo, amathawula, namalineni. I-Wifi iyatholakala. Itafula le-bistro kanye nezihlalo ezisendaweni yokungena zinikeza ikhofi elithulile, eliphumuzayo nendawo yokudlela.
4.91 out of 5 stars from 814 reviews
4.91 · 814 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-814
Ikotishi lisendaweni ethule futhi enobungani bomndeni. Kunesitolo sokubhaka esincane nesekhofi esitholakala kude nje. Futhi, kunezindawo zokudlela ezimbalwa ezibekwe phakathi kwemigwaqo ezungezile. Ngaphezu kwalokho, izindawo zokudlela zama-hip nempilo yasebusuku yamaphoyinti angu-5 ingaphakathi kohambo olujabulisayo oluyingxenye yemayela. I-Shelby Park enwetshiwe futhi enokuthula iseduze nalapho izivakashi zingafinyelela khona ezinkundleni zethenisi namamayela okuhamba nokugijima.
Ababungazi bahlala endlini enkulu kule ndawo futhi batholakala kalula uma becelwa. Kodwa, siphinde sihloniphe ubumfihlo obuphelele bezivakashi.
ULandon Ungumbungazi ovelele